Iyo nyowani dhizaini yeFirefox browser inouya kuIOS uye iPadOS | IPhone nhau
Iyo nyowani dhizaini yeFirefox browser inouya kune iOS uye iPadOS
Ngirozi Gonzalez | | IPhone maapplication, Noticias
La navigation pamusoro peInternet rave kugona kushandiswa nemakambani makuru. Aya ndiwo maratidziro atinoaita neApple uye nekuwedzera kwezvakavanzika maturusi mune ese mashandiro ayo masystem uye Safari sewebhu browser. Nekudaro, mamwe ese mabhurawuza anofanirwawo kuisa mabhatiri ku edza kukwezva vashandisi nemashandiro avo uye dhizaini avo vanofarira vari kuwedzera kuwanda pamunhu. Imwe yemabhurawuza anonyanya kushandiswa ndeye Firefox, nekushandisa kukuru uye zvakawanda zvinoshanda yakagadziridzwa neyakagadzirwa nyowani, nyowani uye yazvino dhizaini ine zvishoma zvitsva maficha.
Firefox inochinja dhizaini yayo mushanduro nyowani yeIOS uye iPadOS
Iyo nyowani nyowani dhizaini inovhara zvese zvikamu zveFirefox, kubva kudesktop mabhurawuza kuenda kune Android uye iOS nhare mbozha. Chiitiko cheIOS chakagadzirirwa iPhone nePad, uye zviito izvozvi zvinotora matanho mashoma ekutsvaga nekukurumidza, kubhurawuza, uye kubata. Iine yakagadziriswa iconography uye mazita emenyu, iyo yese kubhurawuza ruzivo rwunowirirana uye runowirirana pamapuratifomu. Zvinhu zvinotaridzika zvakasiyana muna 2021.
Firefox yakaziviswa dhizaini nyowani yemabhurawuza ako aJune 1 mavhiki mashoma apfuura. Sezvakavimbiswa, nezuro maapplication avo akagadziridzwa uye zvese zvakagadziridzwa zve desktop yavo software zvakaburitswa nenhau idzodzi. Dhizaini nyowani iri kutsva, inogadzikana uye ichiwedzera kufanana neGoogle Chrome uye dhizaini iyo macOS inoda kuyedza kuunza kune ayo mashandisirwo: yakatenderedzwa, yakachena uye yakachena chitarisiko.
Maitiro ekuita Google Chrome yako default browser pane iOS
Pakati peimwe yekuvandudzwa kwayo pane iyo new mushandisi interface yakagovaniswa nema desktop mabhurawuza. Unogona kuitarisa muvhidhiyo yekuratidzira kuti nei dhizaini yakasarudzwa. Uye zvakare, huwandu hwekubata pachiratidziri kuti uite zviito zvekutanga sekuvhura tebhu nyowani zvadzikiswa. Pane rimwe divi, iko kugona kwekutsvaga peji ikozvino inokurumidza nekuwedzera iyo ipfupi icon. Imwe nyowani inowedzerwa tab tireyi kufamba nawo ese nenzira ine simba uye yakapusa.
Hapana mubvunzo kuti Firefox iri kubheja pane shanduko yemafambiro. Kunyangwe chii chakamira pamusoro pekambani iyi ndiko kukunda kwayo kwekuita pachena uye nekwakavhurwa sosi, hapana mubvunzo kuti ivo vanoda kuyedza kutora kutarisisa kweiye mudiki, uye kwete mudiki kudaro, aine dhizaini nyowani inogona kudarika anopfuura mumwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo nyowani dhizaini yeFirefox browser inouya kune iOS uye iPadOS
Apple Inozivisa Vanokunda ve Swift Mudzidzi Dambudziko
Vamwe vashandisi vari kusangana nekunyanyisa bhatiri kunwa neIOS 14.6